Blogestan Iraniana Miresaka Ny Fahafatesan’i Saddam Hussein · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2017 17:13 GMT
Nilaza i Alpar fa azo sokajiana ho taona iray ratsy indrindra ho an'ireo mpanao didy jadona ity taona ity, nilaza koa izy fa mety ahitana izao lohateny izao ny gazety amin'ny Alatsinainy: “Mihena efatra ny Mpanao didy jadona tamin'ny taona 2007″. Nanoratra i Alpar fa hankalaza ity zava-nitranga ity ny Iraniana, na dia hanadino izany atsy ho atsy aza ny governemanta Iraniana, ary nampahatsiahy ny mpamaky momba ireo niharam-boina tamin'ny ady Iran-Iraka, ny adin'ny mpitsoa-ponenana sy ny sisa. Namoaka ity fanontaniana manaraka ity ihany koa izy: Ho lesona ho an'ireo mpanao didy jadona eto amintsika ve ny fahafatesan'i Saddam? Inona no hevitry ny olona ao Iraka mikasika ny zava-nitranga androany? Mihevitra ve i Saddam tenany fa ho faty amin'izany fepetra mahamenatra izany izy indray andro any?
Mattati nilaza kosa fa “namoy ny ainy ny olona nanome endrika an'i Satana, olona izay namono ny namanay sy ny fianakavianay marobe”. Hanatsoaka lesona ve ireo mpanao didy jadona? [Fa], hoy i Mattati.
Rozmaregiha indray nilaza fa lasa ary namoy ny ainy i Saddam, ary noho izany, tokony hanantena isika fa handevina izay tafajanona amin'ny fomba fiheviny, taorian'ny 30 taonan'ny didy jadona. “Anjaran'ny vahoaka Irakiana ankehitriny ny manoratra pejy fotsy amin'ny tantaran'izy ireo,” hoy i Rozmaregiha.